2018 Daalacanayo soo saarka baabuurka sale kulul obd batari dheer tracker gps nolosha gaariga la function Aqoonsado waqtiga dhabta ah warshad anti-xatooyada iyo alaab-| Roadragon
2018 saarka Daalacanayo baabuur sale kulul obd batari dheer gps nolosha tracker baabuur la function Aqoonsado waqtiga dhabta ah anti-xatooyada
2018 saarka Daalacanayo sale kulul obd baabuur batari dheer tracker gps nolosha gaariga la function Aqoonsado waqtiga dhabta ah anti-xatooyada The taxane G-M220, waayo, waa terminal OBD caqli baabuurta ee waafaqsan heerka OBDII / EOBD. Integrated 2G network module isgaarsiinta,-sax sare module GPS ama Beidou / GPS module dual-hab,-waxqabadka sare saddex-dhidibka shidma cuf iyo ECU gaari module isgaarsiinta computer. Jaanqaadaan 9-36V daydo danab ballaaran, waxa gali kartaa gaariga orodka ...
The taxane G-M220 waa terminal ah baabuurta caqli OBD in raacaysaa caadiga OBDII / EOBD.
Integrated 2G network module isgaarsiinta,-sax sare module GPS ama Beidou / GPS module dual-hab,-waxqabadka sare saddex-dhidibka shidma cuf iyo ECU gaari module isgaarsiinta computer. Jaanqaadaan 9-36V daydo danab ballaaran, waxa gali kartaa gaari socda xaaladda, xogta xaaladda gaariga iyo xogta ay gacanta ku darawalka si madal network gaari maamulka dhex module network si ay ugaaraan qabto su'aal track, la socodka xogta gaariga, gaariga baaritaan jireed iyo baabuur-wadidda statistics dhaqanka.
item feature d escription
network 2G Taageerada Bawdada-band network 2G. Module dalalka shisheeyaha ah waxaa lagu bedeli karaa guutooyin inta jeer u dhiganta inuu la qabsado shabakadaha maxalliga ah, la jaan kaararka telefoonka mobile iyo kaararka IoT.
Positioning GPS Support / Beidou hab dual
data OBD Taageerada xogta maamuuska sida OBDII / EOBD
dhaqanka wadista Sida laga soo xigtay xogta gaariga iyo xaaladda, waxaa la falanqeeyay in darawalka uu leeyahay dabeecad xun driving sida xawaaraha degdeg ah, deceleration lama filaan ah, markeeda fiiqan, iwm inta lagu jiro safarka.
Property d escription
alarm ee ka bixitaanka lagu rakibi karo la batari taageero shaqo alarm ah jiidaya soo baxay
tilmaamaha rakibaadda :
1 Raadi gaari OBD kursiga ogaanshaha, tixraac booska interface caadi ah;
2 fur strip ka dhisan ee qalabka iyo geliso card Micro-SIM ah (kaarka dhexdhexaad 3FF) sida ay jihada ee qoraalka;
3 toos Connect terminal si OBD interface ogaanshaha gaariga si xoog on. iftiinka tilmaame The on yahay iyo inay xajiyaan haddii tilmaanta sida caadiga ah libiqsanayo. Ilaa qalabka waa online iyo si caadi ah u taagan yahay, markii hore online iyo qaabkaaga wax yar ka sii jiri doono.
4 Marka gaadiidka la bilaabay, qalab si toos ah xiriiri doonaa gaariga si aad u hesho xogta ay taageerto,
5 Qalabka la batari guud ahaan lagu taliyaa in la bilaabo engine in ay ka qaadaan batteriga muddo ka badan 2 saacadood, si loo hubiyo in digniinta iyo macluumaad kale oo lagu sii daayo.
Fiiro gaar ah: Halbeegyada sida Albaabo yihiin pre-dhigay sida loogu baahan yahay ka hor inta uusan warshada.
Previous: kulul Buugga obd ii tracker gps mini la makarafoon iyo gps programmable tracker baabuurka baabuur oo xamuul ah
Next: nolosha batari dheer smart sax ah oo dhan 2G gaari mini gps obd tracker